DAAWO:Hogaamiyaha W/Kuuriya Oo Sheegay in Dunidu ay Xanuun Badan La Kulmi Doonto Haddii Dalkiisa Cunaqabteyn Lagu Go’doomiyo | Wardaye Online
DAAWO:Hogaamiyaha W/Kuuriya Oo Sheegay in Dunidu ay Xanuun Badan La Kulmi Doonto Haddii Dalkiisa Cunaqabteyn Lagu Go’doomiyo
Wadanka North Korea ayaa ah wadan aysan ka jirin cabsi badan balse waxa la soo sheegayaa in ay cadowgooda weyn u arkaan Mareykanka oo keliya. Wadankan ayaa ka mid ah dalalka aadka u horumarsan ee qaaradda Eeshiya.
Sida weriyuhu ku soo waramayo dalkaasi ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyadii qaranka waxaana hogaamiyaha Kim Jong Un uu axdi ku maray in adduunyadu ay xanuun badan la kulmi doonto hadii ay isku raacdo in dalkiisa laga go’doomiyo dunida inteeda kale.
Dhinaca kale, Kulan deg deg ah oo ay yeesheen Golaha amaanka ee Q.M. ayaa lagu go’aamiyay in cunaqabateyn Cusub la saaro Dalka Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabiyay Bam Nuclear.
Goluhu waxay sheegeen in cunaqabteyntaan ay saameyn doonto dhaqaalaha wadankaasi waxayna sheegeen inay jawaab u tahay tijaabadii 3-dii bishan ay ku sameysamay Gantaal Nuclear ah kaas oo walaac ku abuuray wadamada dariska.
Safiirka Mareykanka u fadhida Q.M.Nikki Haley ayaa sheegtay in Caalamka aysan waligeed aqbali doonin in waqooyiga Kuuriya ay isku hubeyso Bam Nuclear, Cunaqabateyntan ayaa hadii ay dhaqan gasho waxay Waqooyiga Kuuriya weyn doonta saddex meelood meel saliida ay dibadda u dhoofiso.